Ny tanjona telo lehibe nataon'i Shina amin'ny fananganana toeram-pitrandrahana maintso no hampiroborobo tanteraka | Goldpro
Ny tanjona telo lehibe nataon'i Sina dia ny fananganana toeram-pitrandrahana maintso no hampiroborobo tanteraka
Ny fananganana vanja maintso sy ny fampandrosoana ny fitrandrahana maintso no safidy tsy azo ihodivirana sy tokana ho an'ny indostrian'ny fitrandrahana, ary koa ny hetsika manokana ny indostrian'ny fitrandrahana mba hametrahana foto-kevitra fampandrosoana vaovao.
Ny fananganana vanja maintso sy ny fampandrosoana ny fitrandrahana maintso no safidy tsy azo ihodivirana sy tokana ho an'ny indostrian'ny fitrandrahana, ary koa ny hetsika manokana ny indostrian'ny fitrandrahana mba hametrahana foto-kevitra fampandrosoana vaovao. Na izany aza, mba hahatratrarana ny fampiraisana organika ny fampandrosoana ny fitrandrahana sy ny fiarovana ny tontolo iainana, ary ny fanatanterahana ny fivoarana maintso sy ny fampandrosoana maharitra dia mbola miatrika dingana lava sy sarotra ny indostrian'ny fitrandrahana, izay mitaky ezaka iraisan'ny antoko maromaro.
Amin'izao fotoana izao, ny fomba fitrandrahana ataon'ny harena ankibon'ny tany harena ankibon'ny tany Shina dia niteraka fako ratsy sy fahapotehana ny tontolo tontolo iainana, izay manakaiky ny haavon'ny harena sy ny tontolo iainana ary hanakorontana ny fampandrosoana maharitra amin'ny indostria. Ny fitrandrahana ny 10 Mey, ny Forum amin'ny fananganana voaloboka maintso
Ny fihaonana an-tampon'i Shina dia natao tany Beijing tamin'ny taona 2018 ary natsangana ny Komity ho an'ny fampiroboroboana ny Green Mines Association an'ny Sina ho an'ny ala sy ny fampiroboroboana ny tontolo iainana. Cai Meifeng, manampahaizana ao amin'ny Akademia Shinoa sy injeniera ao amin'ny Oniversite Science and Technology any Beijing, dia nilaza fa ny indostrian'ny fitrandrahana dia orinasa iray antoka ho an'ny harena ilaina amin'ny fampandrosoana ny toekarem-pirenena. Amin'ny alàlan'ny hanafainganana ny fananganana vanja maintso ihany no ahafahan'i Shina miditra amin'ny laharam-pahamehan'ny herin'ny harena ankibon'ny tany taloha, ka manome antoka ny fahombiazan'ny harena ankibon'ny tany any Sina. Ny tolotra sy fanohanana maharitra sy azo itokisana amin'ny fampandrosoana ny toe-pirenena dia tsy maintsy tanterahina tsy misy marimaritra iraisana.
Meng Xuguang, mpanampy ny filohan'ny Institut Toekarena momba ny tany sy ny toekarena ao China ary talen'ny Ivotoerana momba ny fanajariana ny tany sy ny harena, dia nilaza fa ny tanjona telo telo ao Shina amin'ny fananganana vanja maintso dia: voalohany, mamadika ny sary, miorina amin'ny fananganana modely vaovao fananganana toeram-pitrandrahana maitso; Faharoa, hanova ny fomba fikarohana momba ny fampandrosoana ny fitrandrahana. Ny fomba fanovana ny endrika vaovao, ny fahatelo dia ny fampiroboroboana ny fanavaozana ary ny fananganana rafitra vaovao ho an'ny asa fampandrosoana ny fitrandrahana maitso. Tamin'ny farany, dia namorona modely tamin'ny fananganana toeram-pitrandrahana maitso misy voninkazo eo amin'ny toerany, eny amin'ny tsipika sy eny ambonin'ny tany i Shina.